Tiro Soomaali oo rag iyo dumarba leh oo lagu xiray dalka Uganda | Universal Somali TV
Tiro Soomaali oo rag iyo dumarba leh oo lagu xiray dalka Uganda
Dalka Uganda ayaa waxaa ka socda hawlgalo ballaaran, ka dib qaraxyadii mataanaha ahaa ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalo madaxda dalkaasi ee Kampala.
Toddobadii maalmood ee ugu dambeysay ayaa hawlgalada lagu soo qabqabtay in ka badan boqol ruux, halka toddobo qof oo kalena lagu dilay, ka dib markii ay boolisku sheegeen inay dadkaasi ka shakiyeen, isla-markaana ay ka dhego adeygeen inay isa soo dhiibaan.
Afhayeenka Booliska Uganda, Fred Enanga ayaa sheegay in hawlgaladu ka socdaan dalka oo dhan, dadkaasina laga soo qabqabtay goobo badan, inkastoo badankood laga soo xiray Caasimadda Kampala.
Afhayeenka ayaa xusay in dadka la soo xiray ay ku jiraan dad Soomaali ah, ka dib markii nin Soomaali ah gaarigii uu watay laga helay walxaha qarxa.
Ninkan ayay ciidamada joojiyeen, xilli uu sii gelayay Hotelka Speke Resort ee Magaalada Kampala, sida uu sheegay Afhayeenka Booliska. Gaarigan oo ahaa kuwa la kireysto ayaa waxa uu u kireysnaa nin kaloo Soomaali ah, labaduba waxaa la sheegay inay xiran yihiin.
"Booliskayna ayaa waxa ay xireen laba qof oo laga shakisan yahay, ka dib markii lagu helay walxaha qarxa, labadaasi qof ee laga shakisan yahay ayaana iminka xabsiga ku jira. Baaritaanada horudhaca ayaa muujinaya in booliska ay walxaha qarxa ku soo qabteen aagga Hotelka Speke Resort ee deegaanka Munyonyo, ka dib markii la baaray gaari cad oo TOYOTA ah, waxaana gaarigaasi waday Cabdikariin Mayow oo 25 jir Soomaali ah, kana mid ah dadka deegaanka Lungujja. Waxa uu ninkani ku andacooday in gaariga uu ka soo kireystay nin kale oo lagu magacaabo Maxamed Xasan oo 28 jir Soomaali ah, oo u sheegay inuu ka soo qaado Munyonyo xubno ka mid ah qoyskiisa, oo kala ah hooyadii iyo walaalihii, sidaana ay tahay sida uu ku soo qaaday walxaha qarxa." Ayuu yiri Fred Enanga, Afhayeenka Booliska Uganda.
Enanga ayaa intaasi ku daray "Waxaa hadda xiran Cabdikariin Mayow iyo Maxamed Xasan, waxaan sidoo kale soo xirnay xubnaha kale ee qoyska oo kala ah Asli Yaasiin Xuseen oo 40 jir ah iyo Mazbal Masal oo iyana 20 jir ah."
Madaxweynaha Uganda, Yoweri Museveni ayaa toddobaadkii hore ku hanjabay inay kooxaha argagixisada ku burburin doonaan fariisimahooda, saacado uun ka dib labadii qarax ee gilgilay Bartamaha Magaalada Kampala.
Kan-xigaRa&#039;iisal Wasaaraha Itoobiya oo g...
Kan-horeTaliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo la ...
62,796,721 unique visits